Maraykanka, 01 August 2017
Talaado 1 August 2017
Madaxii Isgaarsiinta Aqalka Cad oo La Eryey
Madaxii Isgaarsiinta Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka, Anthony Scaramucci ayaa laga eryey shaqada, muddo ka yar laba todobaad kadib marki loo dhiibay xilkaas.
Filimada iyo Saamaynta ay ku Yeeshan Nolosha
Daraasad ay sameeyeen ururka Journal of American Medical Association, ayaa si gaar ah u eegay saamaynta uu bulshada ku yeeshay, filim taxane ah oo ay sii daysay shirkadda Netflix ee dalkan Maraykanka.
Putin oo Soo Ceyriyey Diblomaasiyiin Mareykan ah
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ayaa ku amray Mareykanka inay 755 ka dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyeed, isaga oo uga jawaabaya cunaqabateenta Mareykanka uu saaray Ruushka, sababo la xiriira faro-gelintii ay ku sameeyeen doorashadii madaxweyne ee Mareykanka.
Madaxweyne Trump oo Cambaareeyey China
Madaxweyne Donald Trump ayaa mar kale cambaareeyey Dowlada Shiinaha, kadib marki ay ku guuldareystay in ay ka joojiso Kuuriyada Waqooyi tijaabada gantaalada riddada dheer iyo barnaamijkeeda hubka niyukleerka.
Madaxii Shaqaalaha Aqalka Cad oo La Baddelay
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay xoghayihiisa Amniga gudaha John Kelly inuu noqdo madaxa Shaqaalaha Aqalka Cad, kadib marki xilkaasi laga qaaday Reince Priebus.
Senate-ka oo ku Guuldarreystay inuu Baabi'iyo Obamcare
Aqalka Senate-ka Mareykanka ayaa jimcaha maanta ah ku guul darreystay inuu sameeyo sharci qeyb ahaan baabi’inaya barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obamacare, oo jira muddo toddoba sano ah.
Gabdho Soomaali-Mareykan Ah oo Cafiyey Haweeneey Ku Weerartay Erayo Islaam Naceyb ah
Maalintii Talaada ee la soo dhaafay ayaa magaalada Fargo ee Gobolka North Decotta ee dalkan Mareykanka haweeney Mareykan ah oo cadaan ah, oo 42 jir ah, lagu magacaabo, Amber Hensley, waxey hadallo Islam naceyb ah ku weerartay gabdho dhalinyaro Soomaali ah.
Mareykanka oo ka Hadlay Howlgal ka Dhacay Gaalkacyo
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa sheegay in howl-gal wada jir ah oo ay sameeyeen ciidamo Mareykan ah iyo kuwa Soomaali ah lagu soo qabtay nin lagu tuhmaayo in uu ka tirsanaa kooxda al-Shabaab, kaas oo ay AFRICOM ku sheegeen in uu ahaa fududeeye Shabaabka u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada.
Ruushka oo Aargudasho ugu Hanjabay Mareykanka
Wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda Ruushka ayaa sheegay in Moscow ay aargudan doonto, si ay uga jawaabto cunaqabateynta cusub ee Mareykanka uu saaray, sababo la xiriira faro-gelintii ay ku sameysay doorashadii madaxweyne ee Mareykanka.
Taliyihii Booliska Minneapolis oo Is-Casishay
Taliyaha ciidanka booliska magaalada Minneapolis Janee Harteau ayaa cadaadis la saaray dartiis is-casishay oo xilka ka dagtay, kadib markii nin Soomaali ah oo booliska ka tirsan la sheegay inuu dil u geystay haweenay caddaan ah oo Ausralia u dhalatay.